ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Daraa ပြည်နယ်တွင် သူပုန်များ စွန့်ခွာသွားပြီးနောက် ပြည်သူများ နေရပ်သို့ စတင်ပြန်လာ - Xinhua News Agency
ဒမတ်စကပ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Daraa ပြည်နယ်တွင် ယခင်က သူပုန်များတပ်စွဲထားရာနေရာများ၌ စစ်တပ်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ထောင်နှင့်ချီသောပြည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ နေအိမ်များသို့ အသီးသီး စတင်ပြန်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်း SANA နိုင်ငံသတင်းအေဂျင်စီက ဖော်ပြထားသည်။Daraa ပြည်နယ်ရှိ al-Balad ဒေသတွင် စစ်တပ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကာ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အလံလွှင့်ထူခဲ့ပြီး စစ်တပ်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သော သူပုန်များက ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရာ ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Daraa ပြည်နယ်ရှိ နေအိမ်များသို့ ပြန်လာနေကြသည့် ပြည်သူများအား စက်တင်ဘာ ၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Daraa ပြည်နယ်ရှိ အာဏာပိုင်များသည် ယခင်က သူပုန်များနေရာယူထားခဲ့သော ဧရိယာများတွင် ဗုံးရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့က ပိုက်စိပ်တိုက်ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း ၊ ပြည်သူများ နေအိမ်များဆီပြန်နိုင်ရန် လမ်းပိတ်ဆို့ထားသည်များကိုလည်း ဖယ်ရှားရှင်းလင်းကာ လမ်းများကို ဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းကဖြည့်စွက်ဖော်ပြခဲ့သည်။
al-Balad ဒေသသို့ စစ်တပ်ဝင်ရောက်လာခြင်းသည် Daraa ပြည်နယ်တွင် လပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေသည့် တင်းမာမှုကို အဆုံးသတ်ရန် ရုရှားနိုင်ငံက ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသော သဘောတူညီမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး (OCHA) စာရင်းအရ မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော တင်းမာမှုကြောင့် Daraa ပြည်နယ်တွင် ဒေသတွင်း နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းသူအရေအတွက်မှာ ၃၈,၆၀၀ ဦးရှိကြောင်း၊ ယင်းအနက် အမျိုးသမီး ၁၅,၀၀၀ ဦးနှင့် ကလေးငယ် ၂၀,၄၀၀ ကျော်ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
People start returning home in Syria’s Daraa after rebels’ evacuation
DAMASCUS, Sept.9(Xinhua) — Thousands of people started returning to their homes in Syria’s southern province of Daraa on Thursday following the army’s entry to the formerly rebel-held areas, state news agency SANA reported.
The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) recently placed the number of internally displaced people in Daraa province asaresult of the recent tension at 38,600, including almost 15,000 women and over 20,400 children. Enditem
1-6– People return to their homes in Syria’s southern province of Daraa, on Sept. 9, 2021. Thousands of people started returning to their homes in Daraa on Thursday following the army’s entry to the formerly rebel-held areas, state news agency SANA reported. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua)